Shuute C/llaahi oo maanta lagu dilay Beledweyne - Caasimada Online
Home Warar Shuute C/llaahi oo maanta lagu dilay Beledweyne
Shuute C/llaahi oo maanta lagu dilay Beledweyne
Beledweyne (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil qorsheysan oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaas oo ay geysteen rag ku hubeysnaa bistoolado, sida ay innoo sheegeen ilo deegaanka ah.
Dilka ayaa waxaa loo geystay marxuum Shuute Cabdullaahi oo si weyn looga yaqiinay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wararka ayaa sheegaya in marxuumka uu ka mid ahaa askarta ciidamada dowladda ee ka howlgala halkaasi, waxaana toogasho ku dishay koox hubeysan oo goobta ka baxsatay.
Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya, kuwaas oo howlgallo kooban ka sameeyey xaafado ka tirsan magaaladaasi.
Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi iyo baaritaanada xigay.
Xaaladda ayaa saaka deggan, waxaana si caadi ah u socda dhaq-dhaqaaqa ganacsiga iyo gaadiidka oo muddo kooban hakad galay.
Magaalada Beledweyne oo dhowaan lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah golaha xildhibaanada shacabka Soomaaliya ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacayey falal liddi ku ah amniga sida dilal iyo weeraro qaraxyo ah oo geystay khasaare kala duwan.